Vakakurisa Vashandisi Mumwedzi Wokutanga wePhuket Sandbox Scheme
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Vakakurisa Vashandisi Mumwedzi Wokutanga wePhuket Sandbox Scheme
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Pave neinenge mwedzi kubva iyo Phuket Sandbox yekushanya modhi yakatangwa, uye kubvira ipapo, Thailand yakagamuchira vangangoita zviuru gumi vashanyi vekunze.
Iyo Phuket Sandbox yekushanya scheme yakatangwa mwedzi wapfuura muna Chikunguru 1, 2021, mazuva makumi maviri nemaviri apfuura.
Kubva panguva iyoyo, kwave neinenge zviuru gumi zvevashanyi vauya kuzoshanya uye vanoronga kudzoka kuzonakidzwa nekushanya kune mamwe matunhu.
Saka chaivo vatengi vakanyanya kupi vakabva kupi mukati memwedzi wekutanga wekutanga?
Kutevera kuvhurwa kwechirongwa chekushanyirwa chePhuket Sandbox musi waChikunguru 1, 2021, vashanyi vazhinji vekunze avo vakadzoka kumusha, vanoti vari kuronga kushanyira umambo zvakare nemhuri dzavo, vachibvakacha kushanyira mamwe matunhu akaita seBangkok neChiang Mai.
Sekutaura kweCentre for COVID-19 Situation Administration (CCSA) mutauriri, Dr. Thanakorn Wangboonkongchana, anova Munyori weHofisi yeMutungamiri. iyo Phuket Sandbox kuvhura, padyo nevashanyi zviuru gumi vakauya kuzoshanya. Nyika dzepamusoro shanu dzevashanyi dzakabva kuUnited States, United Kingdom, Israel, Germany, neFrance.